Bilaogera Notorian’ny Bankim-pirenena ao Kenya Noho Ny Lahatsoratra Bilaogy “Manala-baraka” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2016 5:31 GMT
Tamin'ny voalohany nandefa fangatahana manokana ny banky, mangataka amin'ny fitsarana mba hanakana azy tsy hanoratra momba ny banky ao amin'ny bilaoginy, kaonty Twitter na sehatra media sosialy hafa.
Ao Kenya, manome didy vonjimaika mandritra ny fotoana voafetra ny fitsarana mba hanakanana ny andaniny tsy hanatanteraka asa na hetsika. Fomba fanao mahazatra amin'ny tranga fanalam-baraka izany.
Milaza fangalarana nataon'ny mpitantana ambony tao amin'ny banky ny iray amin'ireo lahatsoratra voalaza. Nampiato mpitantana ambony enina ny NBK tamin'ny fiandohan'ity taona ity, anisan'izany ny tale jeneraly mba hanatontosa fanamarinana taorian'ny fitomboana mampiahiahy tamin'ny trosa.
Tamin'ny Jona 2015, notorian'ny Safaricom, orinasa lehibe indrindra momba ny finday ao Kenya izy noho ny fanalam-baraka. Nahavita nahazo didy mandràra ilay bilaogera tsy hamoaka lahatsoratra hafa manala-baraka azy intsony ny Safaricom ary didy mibaiko ny fanesorana izay lahatsoratra rehetra manala-baraka ny Safaricom ao amin'ny bilaoginy.